April 10, 2021 - Achawlaymyar
အချစ်ရေးတွင် လူရွေးမှားပြီဟု သိသာစေနိင်သော အချက်လေးများ ချစ်သူရွေးကြတဲ့ အခါ ဘယ်လို စံနှုန်းတွေနဲ့ ရွေးကြမှာ လဲ။ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ideal type တွေက မတူကြပေမယ့် အချစ်ရေး ကံကောင်းချင်ကြတာကတော့ လူတိုင်းပါ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ပျိုမေတို့အနေနဲ့ အချစ်ရေးမှာ လူရွေးမှားနေပြီဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ (၁) သင်လုပ်သမျှအရာရာကို အဆိုးဘက်က ဝေဖန်တတ်တယ် သင်ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်အစား ပုံံစံကအစ၊ သင်ရွေးချယ်တဲ့ ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်အလယ်၊ သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ ဆိုင်တာတွေအဆုံး သူ့အမြင်မှာ အပြစ်တင်စရာ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ရှိနေတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့အရာရာကို အဆိုးဘက်က ဝေဖန်နေတတ်တယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ လူရွေးမမှားဘူး ဆိုရင်တောင် မှန်တော့ မမှန်ပါဘူးလို့ ပြောရ မှာပါ။ (၂) စကားပြောမှားသွားမှာ … Read more
တောင်ပေါ်ဒေသ လူမျိုးများ အလေးထားသုံးစွဲခဲ့တဲ့ အဖိုးတန် ဆေးဖက်ဝင် ချဉ်စော်ခါးသီး (ချဉ်စော်ခါးသီး ရေနွေးစိမ်သောက်ခြင်းရဲ့ အံ့ဖွယ်အာနိသင်) ဝက်ခြံပျောက်တယ် .. အဆီကျတယ်… ချဉ်စော်ခါးသီး “ချဉ်စော်ခါးသီး အခြောက် ၃-ဖတ် လောက် ကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး၊ ရေနွေး ပူပူခွက်ထဲ စိမ်သောက်လို့ရကြောင်း၊ အဲဒီလိုသောက်တဲ့အခါ ပထမဆုံးစသောက်တဲ့ တစ်ကြိမ်သာ ချဉ်ကြောင်း၊ သို့သော် သံပုရာသီးလို အချဉ်မစူးကြောင်း၊ ချဉ်စော်ခါးသီးကလည်း အဆီချ-ကိုလက်စထေရော ကျစေကြောင်း၊ ဝက်ခြံပျောက်စေကြောင်း။ သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်က ပတမဆုံးတစ်ခွက်သောက်ပြီး နောက် ၁၅-မိနစ်လောက်အကြာမှာ ဆီးအိမ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ဆီးတွေတစက်မကျန် ဆီးသွားပစ်တာကြောင့် ကိုယ်ထဲက ယူရစ်အက်ဆစ်တွေကျပြီး သိသိသာသာ ပေါ့ပါးသွားကြောင်း၊ ဒါကြောင့် အသိမိတ်ဆွေတွေထဲမှာ ဆီးချုပ်-ဆီးအောင့် ရောဂါရှိသူတွေကို ချဉ်စော်ခါးသီး ရေးနွေးစိမ် သောက်သင့်ပါတယ်။ တောင်ပေါ်ဒေသ လူမျိုးများ၏ ရေလဲသုံးသော အဖိုးတန် … Read more
မျက်ရည်ပူကျ၊မျက်စိမှုံ ၊မျက်စိပူစပ် ၊ မျက်ရိုးကိုက် ၊မျက်စိနာခြင်းတို့အတွက် မျက်စိနာ၊မျက်ရည်ပူကျ၊မျက်စိမှုံ ၊မျက်စိပူစပ် မူရင်းနည်းမှာတော့ ဖန်ခါးသီးအခြောက်ပါ ။ ဖန်းခါးသီးအခြောက် မရလျင် အစိမ်းကို ထောင်းပြီး ဆနွင်းမှုန့်အနည်းငယ်ထဲ့ ရေအနည်းငယ်ထဲ့ပီး ညအိပ်ခါနီး မျက်ခွံမှာ လူးပီးအိပ်။ တပတ်ကို သုံးရက်လောက်လုပ်။လူးပီးတာနဲ့မျက်လုံးကို အေးနေတာပဲ။မျက်လုံး ကိုက်တာ ခဲတာကအစ ပျောက်ပါတယ်။ fb ပေါ်မှာတွေ့လို့ကျနော်စမ်းကြည့် ကြည့်ပီး တကယ်ဟုတ်လို့ မျဝေပေးလိုက်ရပါသည်။ ကိုငှက်ကြီး မ်က္ရည္ပူက်၊မ်က္စိမႈံ ၊မ်က္စိပူစပ္ ၊ မ်က္ရိုးကိုက္ ၊မ်က္စိနာျခင္းတို႔အတြက္ မ်က္စိနာ၊မ်က္ရည္ပူက်၊မ်က္စိမႈံ ၊မ်က္စိပူစပ္ မူရင္းနည္းမွာေတာ့ ဖန္ခါးသီးအေျခာက္ပါ ။ ဖန္းခါးသီးအေျခာက္ မရလ်င္ အစိမ္းကို ေထာင္းၿပီး ဆႏြင္းမႈန႔္အနည္းငယ္ထဲ့ ေရအနည္းငယ္ထဲ့ပီး ညအိပ္ခါနီး မ်က္ခြံမွာ လူးပီးအိပ္။ တပတ္ကို သုံးရက္ေလာက္လုပ္။လူးပီးတာနဲ႔မ်က္လုံးကို ေအးေနတာပဲ။မ်က္လုံး ကိုက္တာ ခဲတာကအစ … Read more
နေနိုင်အောင် နေပြီးတဲ့အခါမှ ပြန်ပေါ်မလာပါနဲ့တော့
နေနိုင်အောင် နေပြီးတဲ့အခါမှ ပြန်ပေါ်မလာပါနဲ့တော့ ဝေးမယ်ဆိုရင်လည်း တစ်သက်လုံး ဘယ်တော့မှမဆုံအောင် ဝေးကြတာပဲ ကောင်းပါတယ်။ မဟုတ်ရင် အသားကျအောင်နေခဲ့တဲ့ အချိန်တွေပြီးမှ ပြန်ပြီးပေါ်လာခဲ့ရင် ဒဏ်ရာတွေ အသစ်ပြန်ဖြစ်တာပဲ ပိုပါတယ် …။ အရင်လိုပြန်မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခါ အရင်လိုပြန်ပြီး ယုံကြည်ဖို့ရာက မလွယ်တော့ဘူးလေ …။ ကိုယ့်အနားက မပျော်လို့ ထွက်သွားခဲ့တာပဲလေ၊ ရောက်လေရာမှာ ပျော်ပျော်မပျော်ပျော် အဆင်ပြေအောင်နေတာ ကောင်းပါတယ်။ ချန်ထားခဲ့တုန်းကလည်း နာကျင်ခဲ့ရပြီးပြီ။ ထားမသွားပါနဲ့ ဆိုပြီး မာနတွေလည်း ချနင်းခဲ့ပြီးပြီ။ နေနိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ပြီးမှတော့ ပြန်ပေါ်မလာစေချင်တော့ပါဘူး …။ ချန်ထားခံရမယ့် ကံဟာလည်း တစ်ခါဆိုလုံလောက်သင့်ပြီ ထင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးရင် ကိုယ့်ထက်သာတဲ့သူ ထပ်ရှိရင် နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီး ကျန်ခဲ့အုံး မှာပဲလေ …။ ဘယ်အချိန် ကျန်ခဲ့ရမလဲ တွေးကြောက်နေရတာထက် စာရင် ထပ်ပြီး မနီးစပ်တော့တာဟာ … Read more
ကိုယ့္ဘဝသာယာဖို႔ သူတစ္ပါးဘဝကို ျဖန္႔ခင္းလိုက္ဖို႔ လိုသလား
ကိုယ့်ဘဝသာယာဖို့ သူတစ်ပါးဘဝကို ဖြန့်ခင်းလိုက်ဖို့ လိုသလား ပန်းတစ်ပွင့်ပိုလှဖို့တခြားပန်းတွေ မြေခကြွေကျပေးဖို့လိုသလား? ကိုယ့်ဘဝသာယာဖို့သူတစ်ပါးဘဝကို ဖြန့်ခင်းလိုက်ဖို့လိုသလား? ကိုယ့်ဘဝမြင့်မားဖို့သူတစ်ပါးဘဝကိုနင်းတက်ဖို့လိုသလား? ကိုယ့်ဘဝထင်ပေါ်ဖို့သူတစ်ပါးဘဝကို ပုတ်ခတ်နေဖို့လိုသလား? တစ်ကယ်ဆိုကိုယ့်ဘဝ သာယာဖို့,မြင့်မားဖို့,ထင်ပေါ်နေဖို့ရာ သူတစ်ပါးကိုချနင်းဖြန့်ခင်းပုတ်ခတ်နေဖို့မလိုပါဘူး။ ကိုယ်ကကိုယ်,သူကသူမို့ ကိုယ့်အတ္တနဲ့ယှဉ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ယုတ်တွေကို ရင်ထဲကမောင်းထုတ်လိုက်ပါ။ ပန်းတစ်ပွင့်ပိုလှဖို့တခြားပန်းတွေ မြေခကြွေကျပေးဖို့လိုသလား? Credit Unicode ကိုယ့်ဘဝသာယာဖို့ သူတစ်ပါးဘဝကို ဖြန့်ခင်းလိုက်ဖို့ လိုသလား ပန်းတစ်ပွင့်ပိုလှဖို့တခြားပန်းတွေ မြေခကြွေကျပေးဖို့လိုသလား? ကိုယ့်ဘဝသာယာဖို့သူတစ်ပါးဘဝကို ဖြန့်ခင်းလိုက်ဖို့လိုသလား? ကိုယ့်ဘဝမြင့်မားဖို့သူတစ်ပါးဘဝကိုနင်းတက်ဖို့လိုသလား? ကိုယ့်ဘဝထင်ပေါ်ဖို့သူတစ်ပါးဘဝကို ပုတ်ခတ်နေဖို့လိုသလား? တစ်ကယ်ဆိုကိုယ့်ဘဝ သာယာဖို့,မြင့်မားဖို့,ထင်ပေါ်နေဖို့ရာ သူတစ်ပါးကိုချနင်းဖြန့်ခင်းပုတ်ခတ်နေဖို့မလိုပါဘူး။ ကိုယ်ကကိုယ်,သူကသူမို့ ကိုယ့်အတ္တနဲ့ယှဉ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ယုတ်တွေကို ရင်ထဲကမောင်းထုတ်လိုက်ပါ။ ပန်းတစ်ပွင့်ပိုလှဖို့တခြားပန်းတွေ မြေခကြွေကျပေးဖို့လိုသလား? Credit
ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ် အလျှော့ပေးမှာမဟုတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ဒီလိုပါ
ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ် အလျှော့ပေးမှာမဟုတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ဒီလိုပါ အချစ်ကိုတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ခံယူပုံချင်းမတူပါဘူး။ တစ်ချို့တွေကလည်း အနိုင်ယူပြီးချစ်သလို၊ တစ်ချို့တွေကလည်း အရှုံးပေးပြီး ချစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲချစ်ချစ် ချစ်တာကတော့ အတူတူပါပဲ။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ် အလျှော့ပေးမှာ မဟုတ်တဲ့သူတွေဆိုတာ ဒီလိုပါ။ (၁) မာနကြီးတယ် ဒီလိုမိန်းကလေးတွေဟာ အရမ်းမာနကြီးပါတယ်။ ချစ်သူကိုဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ် အလျှော့မပေးချင်သလို၊ အရှုံးလည်းမပေးချင်ပါဘူး။ ဒီလိုလုပ်လိုက်ခြင်းက ကိုယ့်ရဲ့မာနကို ထိခိုက်နေတယ်လို့ ခံစားရလို့ပါပဲ။ (၂) ပိုချစ်ရတဲ့သူမဖြစ်ချင်ဘူး ဒီလိုမိန်းကလေးတွေဟာ ကိုယ်ကပေးရင်ပေးသလောက် ပြန်ရချင်တဲ့သူတွေပါ။ ကိုယ့်ဖက်ကလည်း အစွမ်းကုန်ချစ်သလို၊ သူ့ဖက်ကလည်း ထပ်တူပြန်ချစ်မှ ကျေနပ်တဲ့သူတွေပါ။ တစ်ဖက်လူက ကိုယ့်ကိုပိုချစ်နေရင်တော့ ကိစ္စမရှိပေမယ့် ကိုယ့်ဖက်က ပိုချစ်နေသလို ခံစားလာရရင်တော့ အဆင်ပြေတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ (၃) ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် ကိုယ်ကပဲအရင်ကျောခိုင်းချင်တယ် ဒီလိုမိန်းကလေးတွေဟာ ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ် … Read more
ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေရင် သေချာတယ် ချစ်နေပြီ
ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေရင် သေချာတယ် ချစ်နေပြီ ပြောဖူးတဲ့ စကားတွေကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး။ ပေးဖူးတဲ့ ကတိတွေကိုလည်း အမြဲတမ်း တည်မိနေတယ်ဆိုရင် သင်က သူ့အပေါ် တန်ဖိုးထားမှုနဲ့ အတူချစ်နေတာ သေချာပါတယ် သေချာတယ် ချစ်နေပြီ တစ်ခါ တစ်ရံမှာ လူတစ်ယောက်ကြောင့် ရင်ထဲ ထူးခြားတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေ ခံစားနေရပေမယ့် ကိုယ်သူ့ကို ချစ်နေတာ ဟုတ်မဟုတ် ဝေခွဲရခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငါသူ့ကို ချစ်နေမိလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်မေးပြီး အဖြေမရဘဲ အချိန်တွေ ကုန်ခဲ့ရတဲ့ နေ့ရက်တွေလည်း ရှိဖူးမာပါ။ ဒါကြောင့် စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေရင် ချစ်နေပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ အကြောင်းမဲ့ ပျော်ရွှင်မှု သူနဲ့တွေ့နေရရုံ၊ … Read more
ဒီစာစုလေးဟာ ခဗျားတို့ကို ကောင်းကောင်းသင်ခန်းစာပေးနိုင်မှာပါ
ဒီစာစုလေးဟာ ခဗျားတို့ကို ကောင်းကောင်းသင်ခန်းစာပေးနိုင်မှာပါ မြွေဟောက် တစ်ကောင်က ကျွန်တော့်ကိုပြောတယ် “ငါကလျှင်မြန်တယ်အဆိပ်ရှိတယ်ငါ့ကို လူတွေကြောက်ကြတယ်” တဲ့ ကျွန်တော်သူ့ကို အရမ်းအားကျမိတယ်သူ့လို လျှင်မြန်ပြီး အဆိပ်ရှိတဲ့ မြွေ ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ် နောက်နေ့မှာ ကျွန်တော် မြွေပွေး တစ်ကောင်နဲ့တွေ့တယ်မြွေပွေးက ကျွန်တော့်ကိုပြောတယ် “ငါက တည်ငြိမ်တယ်ငါ့ဟာငါ အေးဆေးနေတယ် ငါ ဘယ်သူ့ကို မှ ရန်မရှာဘူး ဒါပေမယ့် ငါ့ကို တော့ လာမထိနဲ့ ယင်ကောင်တောင် အလွတ်မပေးဘူး” တဲ့ ကျွန်တော် သူ့ကို အရမ်းလေးစားမိတယ်ကျွန်တော် သူ့လို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နဲ့ အဆိပ်ရှိတဲ့သူ ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ် နောက်တစ်ရက်မှာ ကျွန်တော် ရေမြွေ တစ်ကောင်နဲ့ တွေ့တယ်ရေမြွေက ကျွန်တော့ကို ပြောတယ် “ငါက အဆိပ်မရှိဘူးပျော်ပျော်ပဲနေတတ်တယ်ငါ့ကို လာရန်စ ရင်လည်း ငါဘာမှမတုန့်ပြန်ဘူး ငါ့မှာ … Read more
မင်းကို အရမ်းချစ်ဖို့ (3)မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပြီးဖတ်လိုက်ပါ သူက မင်းကို တစ်အားလည်းရစ်တယ် ။ စိတ်ကောက်ရင်လည်း ခဏ ခဏ ပဲ ။သဝန်တိုတာလည်း အကြိမ်ကြိမ် ။ ဘယ်မှာလဲ ? ဘာလုပ်နေလဲ ? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ နဲ့ မင်း ကို မေးနေ ၊ ပြောနေတာ ကို မင်း က သံသယ မျက်လုံးတွေ နဲ့ အကြည့်ခံနေရတယ် ဆိုပြီး မကြိုက်ဘူး။ အဲ့လို များ ထင်ရင် အကြီးကြီးလွဲပြီပေါ့ ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူတွေက သိပ်ကို ချစ်မိသွားရင် အချစ်ကြီးလာတတ်ကြတယ် ။ အချစ်ကြီးပြီ ဆိုတာနဲ့ မင်းအပေါ်ထားတဲ့ စိတ်က ပေါ့ပေါ့တန်တန် … Read more